Waya agụụ Cleaner
Olee otú ka mma a ezinụlọ mmekọrịta? Dị ka Mama bụ ihe na-eju afọ, Child ọzọ bụ ọmarịcha na Dady bụ ihe obi ụtọ? Gịnị mere unu adịghị jide a party? Biko echegbula, BVC ga-enyere gị rụchaa niile dị ọcha ọrụ. .
Ị nwere ọtụtụ nke enyi na chọrọ iju ha, gịnị mere iju ha site mba a Grịl-Haus party? Ekwela ka gị imetosi ụlọ na-n'ụzọ nke gị na-anọkọ mgbe ụfọdụ ezigbo ndị enyi. Ebe a bụ a 5 nzọụkwụ plan-enyere gị aka ọcha n'ụlọ gị - dịghị nchegbu, dị nnọọ mfe na-nweta ihe aga-eme.
Ya mere ebe-amalite? N'ihi na a Grịl-Haus ọzọ, ndị ọbịa ga-ejikarị oge ha n'èzí, ka ihe ndị kasị mkpa ọcha nọ n'ụlọ na-n'ọnụ ụzọ, ndụ ụlọ, kichin na-asa ahụ. Ọ dịghị mkpa ọcha dum ụlọ kama ilekwasị anya party ụzọ - na ọtụtụ ndị anya ga-na tebụl, shelves na ebe ka ha na-aṅụ.
Ya mfe, dị nnọọ 5 nzọụkwụ:
1. Fresh & Declutter gị ulo.
Tupu ịmalite, na-emeghe a ole na ole windo ikwupụta si n'ụlọ gị n'ihi ya, ọ na-esi isi ọhụrụ na-ọcha. Ọkụ a esi ísì ụtọ kandụl ma ọ bụ spraying gị ohere na deodoriser agbakwụnye ụfọdụ ísì na-esetịpụrụ ndị na ọnọdụ. Next ọ bụ oge iji mee ihe ọ bụla ebe ke party ụzọ na-gabiga ókè cluttered. Ịchọta nwa oge ebe-etinye ndị niile na-enweghị isi ihe dị ka a na-asa ákwà na nkata ma ọ bụ igbe na-echekwa ndị a ruo mgbe nnọkọ oriri ahụ bụ ndị kasị mma na mfe ngwọta.
2. Hichaa gị Door Gate na Ụzọ mbata
Ihe mbụ gị ọbịa ga-ahụ bụ gị ọnụ ụzọ ya mere, ọ dị oké mkpa iji mee ka a ọma mbụ echiche. Mee a ngwa ngwa zaa n'èzí, igbu ọ bụla unyi. Mgbe ahụ ka ụzọ gị n'ime na-eme a zaa gburugburu gị n'ọnụ ụzọ ụlọ nzukọ, ekpocha ọ bụla tụkọtara na-etinye na akpụkpọ ụkwụ, Jaketị, okpu na mail nke anya. Bụkwa Ájá anya tebụl ma ọ bụ achọ ihe na ịgba ụfọdụ deodoriser.
3. prepping ndụ ụlọ
Malite site atụtụ ọ bụla si ebe ihe, imezi ndina, cushions, Ohiri isi na refolding achụpụ (ukwuu n'ihi na ekpuchi elu ọ bụla stains - Otú ọ dị, ị ga-adịghị mkpa na-eme nke a mgbe iji ọ bụla nke BVC ngwaahịa) . Next hichaa table, TV na ihuenyo na ndị ọzọ uzuzu uzuzu na-ebupụta site na iji a microfiber ákwà. N'ikpeazụ, agụụ ọ bụla ájá ma ọ bụ Pita ntutu n'ala, na echefula ọcha gị skirting mbadamba na-eji gị agụụ na ahịhịa ma ọ bụ sooks mgbakwunye.
Get ọhụrụ ozi ọma, collections na-enye nye ogologo gị igbe. Inquiry For Pricelist